> Resource > Mac > Apple DVD Player for Mac
Waxaad daawan kartaa filimada DVD midig computer Iyadoo DVD Player aad. Update DVD Player koriyo xasiloonida sare iyo waxqabadka, iyo taageero White iyo G3 Blue Power Mac iyo sidoo kale nidaamyada G4 Power Mac la naqshadeynta PCI ku salaysan. Waxaad isticmaali kartaa Apple USB SuperDrive dibadda ah oo DVD Player haddii Mac aan haysan ah drive geliyo indhaha.
Taageer oo dhan muuqaalada DVD taaganyihiin
Apple DVD Player waa ciyaaryahan DVD default ee X. OS Waxaa lagu taageeray oo dhan muuqaalada DVD caadiga ah sida video badan oo maqal ah iyo sidoo kale caption raad andDVD @ ccess URLs, Dolby audio iyo sidoo kale subtitles u xiran yihiin.
Xusuusnow meesha aad joojiyay arkaysid
Sida aad ahaayeen isticmaalaya gacanta ka buuxo-saftay fog la ciyaaryahan DVD gaar ah, waxay fududaysaa in aad si aad u koontaroosho aad waayo-aragnimo la daawado. Waxaa xusuusan karaa meesha aad joojiyay daawashada DVD ah oo aad siin doorashada si waqtiga soo socda ciyaarta bilaaban barta in. Waxaad calaamadee karaan goobaha aad jeceshahay u arkaysid mar kasta, ciyaaro warbaahinta ku kaydsan wadid aad u adag, iyo sidoo kale hawlaha ay u DVDs qaarkood adigoo isticmaalaya gacanta ku waalidka
Iyada oo taageero ka DVD Player, waxaad ka heli kartaa oo gacanta ku isku mid aad ka heli lahaa on DVD ciyaaryahan hago, sida guluusyada sahanka, kontaroolada loo maqli karo heerka gudub cutubka, mugga, menu, subtitles, mooshin gaabis ah, xagal camera, audio, iyo in ka badan qaar ka mid ah. Waxa kale oo aad dooran kartaa si aad u daawato filim u eegto in shaashad buuxda ama mid ka mid ah saddex tirada uu furmo suuqa.